ကလေးမြို့က လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအတွက် ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင့် ပြောပြ လာတဲ့ သက်မွန်မြင့် – Cele Oscar
ပရီတ်သတ်ကြီးရေ… ပြည်သူချစ် သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ သက်မွန်မြင့် ကတော့ ပရိသတ်တွေ အရိပ်တကြည့်ကြည့် နဲ့ ချစ်ခင်အားပေးနေရတဲ့ ပြည်သူချစ်မင်းသမီးတစ် လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာလည်း အမြဲအလေးထားသူ ဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးက သူမရဲ့စိတ်ထားလေးကို လေးစားနေကြတာပါ။ ချစ်သက်ကတော့ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အနုပညာ ရှင်များနဲ့အတူ ပူးပေါင်း ပါဝင်နေတာလ ည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ကြားထဲကနေ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လမ်းပေါ်ထွက်ကာ ရင်ထဲက ဆန္ဒအမှန်တရားတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ အခုမှာလည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ရင်း ကလေးမြို့တွင် ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းလေးဦးအတွက် စိတ်ထိခိုက်ဝမ်း နည်းနေကြောင်းကို ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေမှာရှိတဲ့ ပြည်သူ(၄) ဦးနဲ့ ဒဏ်ရာရရှိထားတဲ့ ပြည်သူအယောက်(၃၀) အတွက်လည်း စိတ်ပူနေတာပါ။ ” ကလေးမြို့လေးမှာ သုံးသွားတဲ့ လက်နက်တွေက😭😭😭 ပြည်သူတွေကို အဲ့လောက်တောင် လား အဲ့လောက် လိုလားရှင်! တကယ်ဆို ငါတို့ ကလေးမြို့လေးက သေးတယ်ဆိုရင်လည်း ပြောလို့ရတဲ့မြို့လေးတစ်ခုပါ ဘဲ… တူမီး သေနတ်အားပြုတဲ့ ဖက်ဒရယ်တိုင်းရင်းသားတွေ ကို RPG Bomb တွေ G3 တွေ Sniper တွေ Machine Gunတွေ သုံးပီးဖွိုခှဲသှားတာတော့ တျောတေျာ့ကျိုလှနျပါတယျ..
ငါတို့ရဲ့ရင်ထဲထိကိုနာကျင်ရပါတယ် ဒီနေ့ ကျဆုံးသွား တဲ့ အာဇာနည် 🥀 မအားခူ မောင်ဆန်းသဲ မောင်သားချစ် ကိုထန်ဟောင်လျန်း သူတို့ကတော့တာဝန်ကျေနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပီ 💔 စိုးရိမ်ရအခြေနေ ( ၄ ) ဦးနဲ့ ဒဏ်ရာရရှိသူဦးရေ ၃၀ ကျော်အတွက်ကိုလည်း ဆုတောင်းပေး နေရပါတယ် ခုထိလည်းအခြေနေက မငြိမ်သေးပါဘူး သေနတ်သံတွေ ကကြားနေရဆဲပါဘဲ… media အားနည်းတဲ့ မြို့လေးမို့ speak out လုပ်ပေးကြပါဦး ရှင်🙏🙏🙏” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေး လိုက် ရပါတယ်နော်။
Photo Crd-Thet Mon Myint’s Facebook Page
ပရီတျသတျကွီးရေ… ပွညျသူခဈြ သရုပျဆောငျ အကယျဒမီ သကျမှနျမွငျ့ ကတော့ ပရိသတျတှေ အရိပျတကွညျ့ကွညျ့ နဲ့ ခဈြခငျအားပေးနရေတဲ့ ပွညျသူခဈြမငျးသမီးတဈ လကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေပျေါမှာလညျး အမွဲအလေးထားသူ ဖွဈတာကွောငျ့ အားလုံးက သူမရဲ့စိတျထားလေးကို လေးစားနကွေတာပါ။ ခဈြသကျကတော့ လတျတလောဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထု လှုပျရှားမှုတှမှော အနုပညာ ရှငျမြားနဲ့အတူ ပူးပေါငျး ပါဝငျနတောလ ညျး ဖွဈပါတယျ။
နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့ ကွားထဲကနေ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ လမျးပျေါထှကျကာ ရငျထဲက ဆန်ဒအမှနျတရားတှကေို ထုတျဖျောပွသခဲ့တာလညျး ဖွဈပါ တယျ။ အခုမှာလညျး သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ လူထုလှုပျရှားမှုမှာပါဝငျရငျး ကလေးမွို့တှငျ ကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျးလေးဦးအတှကျ စိတျထိခိုကျဝမျး နညျးနကွေောငျးကို ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ စိုးရိမျရတဲ့ အခွအေနမှောရှိတဲ့ ပွညျသူ(၄) ဦးနဲ့ ဒဏျရာရရှိထားတဲ့ ပွညျသူအယောကျ(၃၀) အတှကျလညျး စိတျပူနတောပါ။ ” ကလေးမွို့လေးမှာ သုံးသှားတဲ့ လကျနကျတှကေ😭😭😭 ပွညျသူတှကေို အဲ့လောကျတောငျ လား အဲ့လောကျ လိုလားရှငျ! တကယျဆို ငါတို့ ကလေးမွို့လေးက သေးတယျဆိုရငျလညျး ပွောလို့ရတဲ့မွို့လေးတဈခုပါ ဘဲ… တူမီး သနေတျအားပွုတဲ့ ဖကျဒရယျတိုငျးရငျးသားတှေ ကို RPG Bomb တှေ G3 တှေ Sniper တှေ Machine Gunတှေ သုံးပီးဖှိုခှဲသှားတာတော့ တောတြော့ကြိုလှနပြါတယြ..
ငါတို့ရဲ့ရငျထဲထိကိုနာကငျြရပါတယျ ဒီနေ့ ကဆြုံးသှား တဲ့ အာဇာနညျ 🥀 မအားခူ မောငျဆနျးသဲ မောငျသားခဈြ ကိုထနျဟောငျလနျြး သူတို့ကတော့တာဝနျကနြှေုတျဆကျခဲ့ကွပီ 💔 စိုးရိမျရအခွနေေ ( ၄ ) ဦးနဲ့ ဒဏျရာရရှိသူဦးရေ ၃၀ ကြျောအတှကျကိုလညျး ဆုတောငျးပေး နရေပါတယျ ခုထိလညျးအခွနေကေ မငွိမျသေးပါဘူး သနေတျသံတှေ ကကွားနရေဆဲပါဘဲ… media အားနညျးတဲ့ မွို့လေးမို့ speak out လုပျပေးကွပါဦး ရှငျ🙏🙏🙏” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပဲ ဖွဈပွီးပရိသတျတှအေတှကျ ဒီသတငျးလေးကို တဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေး လိုကျ ရပါတယျနျော။